भवन निर्माण: गुणस्तरीय निर्माणको मुख्य कम्पोनेन्टहरू - घर जग्गा ब्लग - रियल्टी डब्ल्यूडब्ल्यू:
भवन निर्माण: गुणस्तरीय निर्माणको प्रमुख कम्पोनेन्टहरू
मार्च 12, 2020 by इभान जेभियर, कुल अवलोकन:
आर्किटेक्चर र इन्जिनियरि ofको क्षेत्रमा उन्नतिले सस्तो लागतमा उच्च-भवनहरू निर्माण गर्न सजिलो भएको छ। कम्पनीहरूले आफ्नो व्यापार विस्तार गर्दैछ र विभिन्न देशहरू र क्षेत्रहरूमा कार्यालय स्थानहरू निर्माण गर्दैछन्। र सस्तो र कम्प्याक्ट हाउजिंग प्रोजेक्टको लागि धन्यवाद, विश्वव्यापी रूपमा आफ्नै घरको स्वामित्व लिने व्यक्तिको सपना वास्तविकतामा परिणत भयो। यद्यपि, बिना उच्च-गुणवत्ता भवन आपूर्तिसंरचनाको दीर्घायु सुनिश्चित गर्न सम्भव छैन, उद्योगको स्थिर विकासलाई निरन्तरता दिन लागत पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
सामान्य रूपमा उपलब्ध निर्माण सामग्रीहरू के के हुन्?
लगभग सबै भवन आपूर्ति तपाईंको नजिकको आपूर्ति स्टोरहरूमा फेला पार्न सकिन्छ। ती मध्ये धेरै आयात गरिन्छन् जबकि अन्य स्थानीय रूपमा निर्माण वा उत्पादन गरिन्छ। संरचनाको प्रकार, माटोको गुणस्तर, र अन्य अन्य कारकहरूमा निर्भर गर्दै, वास्तुकारले आवश्यक सामग्रीहरू सुझाव दिन्छ।
१ सिमेन्ट, माटो र माटी
सम्भवतः सबै सामग्रीहरू मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तिनीहरू एक संरचनामा आधार घटक हुन्। यी सामग्रीहरू मध्ये प्रत्येक एक संरचना, वा संयुक्त निर्माण गर्न पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, र प्रत्येकको अनुपात विशेष भवनको प्रकारमा निर्भर गर्दछ। जबकि माटो र माटो अनिवार्य साना संरचनाहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ, प्रायः ग्रामीण क्षेत्रमा; सिमेन्ट मुख्य रूपले कंक्रीट भवनहरू र गगनचुम्बी भवनहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ। सिमेन्ट ती सबैमा सब भन्दा बलियो बाइन्डर हो।
फ्रेमलाई संरचना समात्न आवश्यक छ। किनकि कठोरता र दीर्घायु प्राथमिक मापदण्ड हो, सामान्यत: स्टीलको डण्ड फ्रेमका लागि प्रयोग गरिन्छ। सफल फ्रेम स्थापना पछि, भवनको आधारभूत संरचना स्थापना गर्न क concrete्क्रीट खन्याइएको छ। फ्रेमहरू टिम्बर, लग वा इन्टरलिंग स्टीलको डण्डबाट बन्न सकिन्छ, र श्रमिकहरूलाई ईंटहरू राख्न वा अन्य धेरै कार्यहरू गर्न मद्दतको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
B. इट्टा र ब्लकहरू
आधारभूत संरचना र फ्लोरहरू सामान्यत: कंक्रीट र डन्डाले बनेको हुन्छ, र पर्खालहरू ईट्टा र ब्लकबाट बनेको हुन्छ। ईंटहरू सुख्खा माटोले बनेका हुन्छन् जबकि ब्लकहरू सिलाडीले बनेका हुन्छन्। यो इँटको भित्ता बनाउन क concrete्क्रीट र स्टीलको डन्डा भन्दा सजिलो छ।
G. गिलास, सिरामिक्स र काठ
जबकि अन्य भवन आपूर्ताहरू भवन निर्माण गर्न र सुदृढीकरण गर्न प्रयोग गरिन्छ, यी सामग्रीहरू यसलाई सजावटको लागि प्रयोग गरिन्छ। गिलास ढोका र विन्डोजमा प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो, टाईलहरू र फिक्स्चरहरू सामान्यतया सिरेमिकहरूद्वारा बनेका हुन्छन्, र फर्निचर, ढोका, र अन्य सजावटी वर्गहरूका लागि काठ मुख्य सामग्री हुन्छ।
उत्तम गुणवत्ता निर्माण सामग्रीहरू खरीद गर्नुहोस्
अन्तिम पुस्ताको लागि भवनको लागि, उत्तम गुणस्तरको सामग्री प्रयोग गर्नुपर्नेछ। ईन्फेरियर सामग्रीले संरचना सजिलैसँग दरारहरू विकास गर्न सक्दछ र त्यसैले समय जाँदा कठोर मौसमको सामना गर्न सक्षम हुँदैन। यसबाहेक, यसको लागि लगातार मर्मत र मर्मतको आवश्यकता पर्दछ। त्यसकारण, निर्माण गुणस्तरका लागि उत्तम गुणस्तरको निर्माण आपूर्ति खरीद गर्नु महत्वपूर्ण छ। यसबाहेक, विक्रेता लागत बचाउन आवश्यक सामग्री को सही मात्रा निर्धारित गर्न ठूलो सहयोगी हुन सक्छ।
सबै भवनहरूको आपूर्ति एकै ठाउँमा पाउनुहोस्
हरेक प्रकारको निर्माण सामग्री, इन्सुलेशन, प्लास्टिक, साइडिंग, चिनाई, भवन हार्डवेयर र मोल्डहरू समावेश गर्दै, समान आपूर्तिकर्ताबाट किन्न सकिन्छ। यद्यपि तपाईं आपूर्तिकर्ताबाट किनमेल गर्न चाहानुहुन्छ कि केवल वास्तविक र प्रमाणित उत्पादनहरू मात्र बेच्नुहुन्छ। अब, परियोजना को प्रकार मा निर्भर गर्दछ, आपूर्ति को आवश्यकता फरक हुन सक्छ। जबकि केही संरचनालाई ऐक्रेलिक पानाहरू, गिलास र काठ प्यानलको व्यापक प्रयोगको आवश्यक पर्दछ, जबकि अन्यहरूलाई त्यस्ता सामग्रीहरूको न्यूनतम आपूर्तिको आवश्यक पर्दछ। सामग्री जस्तोसुकै भए पनि, सबै आधारभूत आपूर्तिहरू, उन्नत मेसिनरी र उपकरणहरू तपाईंको अर्डरको मात्रामा आधारित, किफायती मूल्यमा प्राप्त गर्न सकिन्छ, र तपाईं तिनीहरूलाई केही समयमा आफ्नो इच्छित स्थानमा डेलिभर गर्न सक्नुहुनेछ। अनलाइन वेबसाइटहरूले ठूलो छूटमा एकै छत मुनि सबै आवश्यक आपूर्ति प्रस्ताव गर्दछ; त्यसैले त्यहाँ तपाईं वा तपाइँको फर्मको वरिपरि शपिंग गर्न वा बिभिन्न विक्रेताहरूलाई सम्पर्क गर्न आवश्यक छैन शीर्ष-गुणवत्ता निर्माण आपूर्तिको फेला पार्नुहोस्। अर्डरहरू अनलाइन राख्न वा कल मार्फत तपाईको माउसको केहि क्लिकहरू मात्र राख्न यो सजिलो छ।
इभान जेभियर मार्च 12, 2020
यो प्रविष्टि मा पोस्ट घर जग्गा भवन र ट्याग भवन आपूर्ति। बुकमार्क को Permalink.
अप्रिल 5, 2019 भवन संरचनामा स्टील प्रयोग गर्ने शीर्ष फाइदाहरू यो सुन्दर विला, गगनचुम्बी भवन, विशाल पुल, वा समकालीन अपार्टमेन्ट हो, स्टिल एक उपयोगी धातु हो जुन यी सबै भवन संरचनाहरूमा प्रयोग गरिन्छ। इस्पात कडा, टिकाऊ हो, र वर्षहरु मा कुनै न कुनै मौसम खडा गर्न सक्छन्। धातु रियल ईस्टेट र निर्माण क्षेत्रमा मुख्य छ किनकि यसले निर्माणकर्ताहरू र श्रमिकहरूलाई अद्वितीय र मजबूत संरचनात्मक समाधानहरू निर्माण गर्न सक्षम गर्दछ जुन सबै भन्दा राम्रो हो। धातुको उल्लेखनीय सुविधाहरू हुन् सुन्दरता, अनुकूलन योग्यता, स्थायित्व, लचीलापन, […] पोस्ट घर जग्गा भवन
डिसेम्बर 11, 2018 Major मुख्य कारणहरू तपाईले आफ्नो घरको लागि सधैं एक पेशेवर निर्माण कम्पनी राख्नु पर्छ के तपाईसँग सपनाको घर छ? यथार्थमा ल्याउने योजना कसरी बनाउने? सबैको जीवनमा यस्तो समय आउँछ जब तपाईंलाई साँच्चिकै ठूलो घर चाहिन्छ र तपाईले गर्न सक्नुहुने भनेको आफ्नै परिवारको घर निर्माण गर्नु हो। किन धेरै मानिसहरू मन पराउँछन् र आफ्नै परिवारका घरहरु यो संग आउने स्वतन्त्रता को कारण हो। यस बाहेक घरको मालिकको अन्य धेरै फाइदाहरू पनि छन्। एउटा अचम्मको फाइदा भनेको तपाईको घरलाई अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईलाई चाहानुहुन्छ विकल्प र डिजाईनमा। थप रूपमा, तपाईं […] पोस्ट घर जग्गा भवन
अप्रिल 12, 2018 घर निर्माणकर्ताहरूको लागि great उत्तम सुझावहरू घर निर्माण परियोजनाहरू सधैं चुनौतीपूर्ण हुन्छन्। त्यहाँ असंख्य प्यारामिटरहरू छन् जुन त्यस्ता प्रोजेक्टहरू ठीक ढ exec्गले कार्यान्वयन हुनुभन्दा अघि मानिनु पर्छ। धेरै जसो केसहरूमा घर निर्माणकर्ताहरू महँगो ढिलाइ र अत्यधिक समय खपत हुने रेकर्सको बिरूद्ध लडिरहेका छन्। भनिएको छ, यो अपरिहार्य छ कि तिनीहरूसँग सही योजना र उपकरणहरू छन् ताकि तिनीहरू आफ्नो परियोजनाको कार्यकुशलता बढाउन र विभिन्न कार्यहरूको समाप्तिलाई छिटो बनाउँदछन्। […] मा सूचना प्रवाहको अनुकूलन गर्दै पोस्ट घर जग्गा भवन
अगस्ट 29, 2017 तपाईंको अनुकूलित घर बनाउँदा7उपयोगी सल्लाहहरू तपाईंको कस्टम सपनाको घर बनाउनु सजिलो उपलब्धि होइन। यो तनावपूर्ण र लामो प्रक्रिया हो कि समय, प्रयास, र श्रोतहरूको पूर्ण बाल्टिन आवश्यक पर्दछ। तर यो सबै यसको लागि लायक छ यदि यसको मतलब वास्तविकतामा त्यो सपनाको निर्माण गर्नु हो। तपाई घण्टौं पछि घण्टा खर्च गर्नुहुनेछ; महिनौं योजना र निर्माण को महिना पछि। तपाईले केही नराम्रो कलहरू गर्नुहुनेछ तर प्रक्रियामा एक मुठीभर राम्रा कलहरू। यो गाह्रो र उत्साहजनक हुन गइरहेको छ। जहाँसम्म, उचित संगठन, अनुसन्धान, र […] को मद्दतको साथ। पोस्ट घर सुधार, घर जग्गा भवन, सार्दै
मार्च 28, 2018 तपाईंको घर बिल्डरलाई सोध्न6प्रश्नहरू के तपाईं हाल योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ र चाँडै तपाईंको सपनाको घर बनाउने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ? सम्भाव्यता तपाईले पढ्नु भएको छ कि के गर्नु पर्छ र के गर्नु हुँदैन - एक विश्वसनीय घर बिल्डर छनौट सहित। तर तपाइँ कसरी जान्नुहुन्छ यदि तपाइँ एक महान बिल्डरसँग काम गर्दै हुनुहुन्छ? कसरी तपाईं कसरी भन्न सक्नुहुन्छ कि तिनीहरूले एक शानदार काम गर्दैछन् यदि तपाईंसँग प्रक्रियाको बारेमा केही ज्ञान छैन भने? सुरू गर्नका लागि, तपाई केवल एक मात्र सम्पर्कमा रहनु हुँदैन, तर बिल्डर्सको संख्याले तपाईंलाई सिफारिश गर्‍यो। त्यसो भए, आफ्नो छनौटहरूलाई कम गर्नुहोस् […] पोस्ट घर जग्गा भवन
डिसेम्बर 13, 2018 बनाम बनाम खरीद बनाम रेनोभेट बनाउनुहोस् तपाईं कसरी आफ्नै घर बनाउने निर्णयमा पुग्नुभयो? के यो आजीवन सपना भएको छ? के तपाईं पहिले देखि नै निर्मित घर खरीद गर्न र बजारमा हेर्दै निराश हुनुभयो? के चाहिएको मर्मतसम्भारको लागत "Scratch बाट सुरु गरौं" लाई रेखा पार गर्यो? के तपाईको जीजा, साथी वा छिमेकीले आफ्नै घर निर्माण गरे कि अब तपाईको पालो आयो? यदि तपाइँ अगाडि बढ्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने, बुझ्नुहोस् कि स्क्र्याचबाट निर्माण छिटो र सजिलो विकल्प छैन। यसले समय लिन्छ, धैर्यता। […] पोस्ट घर जग्गा भवन
फेब्रुअरी 6, 2019 एक राम्रो निर्माणकर्ता हुनुको5विशेषताहरु वर्णन गरीयो चीजहरू निर्माण वा निर्माण गर्नु सधैं एक रोमाञ्चक र मोहित अवधारणा हो। धेरै व्यक्ति जो ठूला घर जग्गा निर्माणकर्ताहरू हुन ठूला हुन्छन् अक्सर उनीहरूको बाल्यकालदेखि नै भवन निर्माण गर्न नक्कल हुन्छ। कुनै श doubt्का बिना, यी निर्माणकर्ताहरूको तिनीहरूभित्र केही जन्मजात गुण हुन्छन् जसले उनीहरूको पेशेमा उनीहरूलाई यति धेरै राम्रो बनाउँछन्। जब तपाईं आफ्नै धेरै सपनाको घर बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, बिल्डर्सको एक राम्रो टोली तपाईंलाई खोज्नु पर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चीजहरू मध्ये एक हो। अन्तिम रूप दिए पछि […] पोस्ट घर जग्गा भवन
फेब्रुअरी 23, 2018 Common साधारण घर निर्माण गल्तीहरू जोगिनका लागि यदि तपाईं आफ्नो घर बनाउने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ भने डिजाईन र तपाईंको चाहना पछाडि हेर्नुहोस्। घर बनाउने काम भारी मोलको साथ आउँदछ र प्राय: पटक, तपाईंले बजटको अवरोधका कारण सपना देख्नुहुनेको निर्माण गर्न सक्नुहुन्न। जे होस्, प्रक्रियासँगै तपाईंले गर्नुभएको सम्झौताले तपाईंलाई घर चाहिन्छ। नयाँ घरमालिकको रूपमा, तपाईं गल्तीहरूका लागि बाध्य हुनुहुन्छ। चिन्ता नलिनुहोस्, यो अपरिहार्य छ र धेरैले उनीहरूबाट सिकेका छन्। यदि तपाईं अझै योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने […] पोस्ट घर सुधार, घर जग्गा भवन